सिंगापुरविरुद्ध नेपालको प्लेइङ ११ मा को–कोले पाउलान् मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
सिंगापुरविरुद्ध नेपालको प्लेइङ ११ मा को–कोले पाउलान् मौका?
काठमाडौं, साउन ११ । सिंगापुरमा जारी आइसीसी टि–२० विश्वकप एसिया छनोट अन्तर्गत नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा आइतबार सिंगापुरसँग खेल्दैछ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार बिहान ७ः१५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । ग्लोबल छनोट हुन दुवै टिमलाई आइतबारको खेल जित्नैपर्ने हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस समर्थकलाई पूर्वकप्तान दासको आग्रहः ‘हार स्वीकार्न सक्नुहुन्न भने समर्थन पनि नगर्नुस्’
नेपालले ३ खेल एकमा हार र २ खेलमा जीत हासिल गरेको छ । यता सिंगापुरले तीन खेलमा २ मा जीत र एक खेलमा वर्षाका कारण अंक बाँडेको छ । अंक तालिकामा सिंगापुर शीर्ष र नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । नेपालले आज कुवेतलाई ७ विकेटले हरायो । आजको खेलमा नेपालको प्लेइङ ११ मा एक खेलाडी मात्र परिवर्तन गरिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप छनोटः जोर्डनसँग नेपाल ३–० ले पराजित
मलेसियविरुद्ध ढाडको समस्याको कारण विश्राममा रहेका कप्तान पारस खड्काले आज टिमको नेतृत्व गरेका थिए । मलेसियासँग उनको स्थानमा प्रदीप ऐरीले मौका पाएका थिए । सिंगापुरविरुद्ध हुने निकै महत्वपूर्ण खेलमा नेपालको प्लेइङ ११ मा कोकोले पाउन सक्छन् मौका?
नेपालको सम्भावित प्लेइङ ११ः पारस खड्का (कप्तान), ज्ञानेन्द्र मल्ल, विनोद भण्डारी, शरद भेषावकर, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, रोहितकुमार पौडेल, करण केसी, बसन्त रेग्मी र पवन सराफ ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप छनोटः नेपालले आज कुवेतसँग खेल्दै
ट्याग्स: विश्वकप छनोट, सिंगापुर भर्सेस नेपाल